Haweeney 50-jeer Qaliin kusameesay Wajigeeda si ay Ugu Ekaato Aktarad Caan ah
Haweeney u dhalatay dalka Iran oo lagu magacaabo Sahar Tabar, ayaa 50-mar qaliino isaga sameesay wajiga si ay ugu ekaato aktarada caanka ah ee u dhalatay dalka Mareykanka Angelina Jolie.
Sahar Tabar oo ah 22-sano jir caan ka ah baraha bulshada gaar ahaan Instagram ayaa go’aansatay in ay wajiga isaga sameyso qaliino badan si ay caan u noqoto uguna ekaato aktarada Angelina Jolie ee caanka ku ah jilida filimaanta Hollywoodka.
Telefishenka Iranian Channel Two ayaa baahiyay wareysi uu la yeeshay gabadhan qaliinada badan wajiga isaga sameesay, waxa uuna Tv-ga sheegay in gabadhan ay qaaday talaabooyin badan oo argagax leh saameyn badana ku yeeshay nolosheeda.
Gabadhan baraha bulshada caanka ka ah ayaa la sheegay in ay tahay madi , waxa ayna sheegtay Sahar in markii yareyd aad u jecleyd in ay noqoto qof caan ah inkastoo ay beenisay in ay dooneysay in ay u ekaato aktarada Angelina Jolie.
”Uma eki sawirka been abuurka ah ee la iga sameeyay, Yaranteyda waxaan doonayay in aan noqdo qof caan ah oo dadku yaqaanaan, talaabooyinkan aan qaaday hooyadey raali kama aheyn laakin saaxiibo ayaa igu dhiiro galiyay ” ayey tiri Sahar .
Dadka reer Iran ayaa aad u hadal haya sheekada gabadhan qaliinada badan wajiga isaga sameesay, waxa ayna dadku badi sheegeen in gabadhan markii hore qurux badneyd balse hada wajiga isaga dheeshay.
Gabadhan qaliinada isku sameesay ayaa la sheegay in hada xabsi ku jiro lana xiray 5-tii bishan October, waxaana lagu eedeeyay in ay u gaftay diinta Islaamka gaar ahaan ay wax ka sheegtay xijaabka haweenku xirtaan, waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago.